पोर्चुगलमा Aveiro: लघु भेनिस मा भएको महसुस Absolut यात्रा
पोर्चुगल मा Aveiro
लुइस मार्टिनो | | पोर्चुगल
जब तपाईं पोर्चुगलको Aveiro भ्रमण गर्नुहुन्छ तपाईं भित्र भइरहेको भावनाबाट बच्न सक्नुहुन्न सानो भेनिस। तीनवटा च्यानलहरू द्वारा क्रस गरिएको जुन हालसालै समुद्री शैवाल र नुन ढुवानी गर्न प्रयोग गरिएको थियो, यो पनि चाखलाग्दो छ कला नौव्यू वास्तुकला र विभिन्न धार्मिक स्मारकहरू। यदि यो पर्याप्त छैन भने, यसले तपाईंलाई विश्वविद्यालय शहरको एनिमेसन, उत्कृष्ट समुद्र तट र सानो शहरको सुविधा प्रदान गर्दछ।
Aveiro मात्र सत्तरी किलोमिटर बाट छ पोर्टो र एक सीधा ट्रेन दुबै स्थानहरू सञ्चारको जिम्मामा छ। यसले धेरै पोर्टो टुरिस्टहरू Aveiro मा बगाल बनाउँछ दिन यात्रा। जे भए पनि, यस सानो शहरका सबै गुणहरूले यसलाई विश्वको मनपर्ने गन्तव्यहरू मध्ये एक बनाएको छ। पोर्चुगलको उत्तर। यदि तपाईं उनलाई जान्न चाहनुहुन्छ भने, हामी तपाईंलाई हाम्रो भ्रमणमा हामीलाई अनुसरण गर्न प्रोत्साहित गर्दछौं।
1 पोर्तुगल मा Aveiro को स्मारकहरु
1.1 रिपब्लिक स्क्वायर
1.2 अभेरो क्याथेड्रल
1.3 पुरानो सिरेमिक कारखाना जेरेनिमो पेरेरा क्याम्पोस
1.4 येशू र आभेरोको संग्रहालयको कभेन्ट
1.5 बैठक विज्ञान संग्रहालय को कारखाना
1.6 Marinha da Troncalhada को Ecomuseum
1.7 भिस्टा एलेग्रे संग्रहालय
1.8 रेल स्टेशन
1.9 Aveiro लाइटहाउस
1.11 Infante डोम पेड्रो पार्क
2 गतिविधिहरू Aveiro मा गर्न
3 पोर्चुगल मा Aveiro को Gastronomy
4 Aveiro को जलवायु
5 पोर्चुगल मा Aveiro कसरी पुग्ने
6 पोर्चुगलमा Aveiro को बारे मा चासो को अन्य जानकारी
पोर्तुगल मा Aveiro को स्मारकहरु
Aveiro को आदिम केन्द्रक को आसपास छ बेइरा मार्च, यसको साँघुरो सडक र नहरहरू द्वारा फ्रेम कला नौउउ घरहरू हडताल, profusedly सजाइएको facades संग। तिनीहरू २० औं शताब्दीको सुरुमा पुर्तगाली आप्रवासीहरूले बनाएका थिए जो ब्राजिलमा आफ्नो भाग्य बनाएर फर्केका थिए। तर Aveiro तपाईंसँग देखाउन अन्य स्मारकहरू छन्।
यो Aveiro को ऐतिहासिक केन्द्र को तंत्रिका केन्द्र हो। यो एक अर्ननेट फ्लोरको साथ एक ठूलो सहरी ठाउँ हो र जहाँ तपाईं हेर्न सक्नुहुन्छ शहर हल भवन र दयाको चर्च, जसको बारेमा हामी छिट्टै तपाईसँग कुरा गर्नेछौं। तपाईले यस वर्गमा पोर्तुगाली राजनीतिज्ञलाई मूर्ति पनि भेट्टाउनुहुनेछ जोस एस्टेभाओ, जो यस शहर मा जन्म भएको थियो।
कला नौव्यू वास्तुकला
पनि भनिन्छ साओ डोमिन्गो डे अभेरोको चर्च, चौधौं शताब्दीमा निर्माण गरिएको थियो। यद्यपि बाहिरी रूपमा केवल पर्खालहरू मध्ये एउटा मात्र बाँकी छ, बाँकी १ XNUMX औं शताब्दीमा पुनर्निर्माणको कारण हो। यसको सट्टामा, मन्दिर भित्र तपाईले प्रख्यात देख्न सक्नुहुन्छ साओ डोमिन्गोसको गोथिक क्रुजिरो, जुन पहिलो भवनको भाग हो। साथै यसको भित्री भागमा आधुनिकतावादी प्रेबयटरी, बारोक कयर्स, केही तरीकावादी चापेल र दर्शनीय पाइप अंग छन्।
यस मन्दिरबाट कुनै बाधा नलगाई हामी फेला पार्दछौं चर्च अफ मर्सी, एक सानो १orn औं शताब्दीको चैपल एक सुन्दर मन्नेरिस्ट पोर्टिकोको टाईलले सजिएको। अधिक टाईलहरू, नक्काशी र चित्रहरू सहितको भित्री भाग पनि भ्रमणको लागि योग्य छ।
पुरानो सिरेमिक कारखाना जेरेनिमो पेरेरा क्याम्पोस
औद्योगिक वास्तुकलाको यो महत्त्वपूर्ण नमूना पोर्चुगलको अभेरोको सबैभन्दा महत्वपूर्ण स्मारक हो। उनको रातो माटोको मुख र हालै क center्ग्रेस सेन्टर र शो स्थलको रूपमा प्रयोग भएको छ।
येशू र आभेरोको संग्रहालयको कभेन्ट
कन्भेन्टुअल संलग्नक एक १ure औं शताब्दीको निर्माण हो जुन पछि बारोक तत्वहरू थपिए। यो को चिहान हो राजकुमारी सान्ता जोआनापोर्तुगालको राजा अल्फोन्सो वीको छोरी। तर सबै भन्दा माथि यो मुख्य कार्यालय हो अभेरो संग्रहालयजहाँ तपाईं १ of औं देखि १ th औं शताब्दीसम्म कलाका असंख्य कार्यहरू देख्न सक्नुहुनेछ, साथै ऐतिहासिक पाण्डुलिपिहरू र पुरातात्विक अवशेष जुन क्षेत्रबाट छ।
Jerónimo पेरेरा सिरेमिक कारखाना
बैठक विज्ञान संग्रहालय को कारखाना
तपाइँ तपाइँको बच्चाहरु संग भेट को लागी आदर्श, यस मा बाह्य अन्तर्क्रियात्मक कोठा समर्पित छ रोबोटिक्स, ला बायोकेमिस्ट्री र अन्य वैज्ञानिक विषयहरु। यसले तपाईंलाई धेरै प्रस्ताव गर्दछ स्थायी प्रदर्शन निकै रोमान्चक।
Marinha da Troncalhada को Ecomuseum
यदि तपाइँ जान्न चाहानुहुन्छ उनीहरूले कसरी काम गरे पोर्चुगल मा Aveiro नुन फ्लैट्सतपाईं ती साईटहरू मध्ये कुनै एकमा अवस्थित रहेको अवस्थित यो साइट भ्रमण गर्न सक्नुहुन्छ। यसले निकासको यो पुरानो अनुशासनको संरक्षणको लागि पनि कार्य गर्दछ जुन 959 XNUMX since देखि अभ्यास गरिएको छ।
भिस्टा एलेग्रे संग्रहालय
La भिस्टा एलेग्रे पोर्सिलेन यो १ 1824२XNUMX देखि उत्पादनमा रहेको छ र इ England्ल्यान्डको रानी जस्ता ग्राहकहरूसँग विश्वमा सबैभन्दा प्रसिद्ध छ। अवेरोको धेरै नजिक तपाईं संग यो संग्रहालय छ जहाँ तपाईं यसको सबै भन्दा राम्रो टुक्रा देख्न सक्नुहुन्छ।
यदि तपाईं ट्रेन द्वारा पोर्चुगलको Aveiro आइपुग्नुभयो भने, तपाईं शहर मा हुनेछ पहिलो आश्चर्य स्टेशन को धेरै fçade छ। किनकि यो ठूलोले ढाकिएको छ पोलिक्रोम टाइलहरू त्यो क्षेत्र को विशिष्ट दृश्यहरु लाई बनाउँदछ। उदाहरण को लागी, मछुवाहरु को गतिविधि, नुन फ्लैटहरु वा Aveiro केन्द्रीय च्यानल।
बारा समुद्री किनारमा अवस्थित छ, जुन हामी पछि हेर्ने छौं, यो तपाईंको उचाईको कारण तपाईंको ध्यान आकर्षण गर्दछ। वास्तवमा, यो छ पोर्चुगलमा सबैभन्दा बढी र दोस्रो सबैभन्दा उच्च इबेरियन प्रायद्वीपमा। यो १ 1893 23 since देखि सञ्चालनमा आएको छ र यसको प्रकाशको २ XNUMX समुद्री मीलको दायरा छ।
अभेरो मुहानको किनारमा अवस्थित, यो शहरको भ्रमण पछि आराम गर्नका लागि यो एक आदर्श पार्क हो। यसमा तपाईं बोट प्रजाति र भव्य दृश्यहरूको एक महत्त्वपूर्ण विविधता हेर्न सक्नुहुन्छ। साथै, यदि तपाईं थोरै भाग्यशाली हुनुहुन्छ भने, तपाईंको भ्रमण धेरै मध्ये एउटासँग मिल्नेछ कारीगर बजार यो पार्क मा आयोजित।
Infante डोम पेड्रो पार्क
सायद पहिलेको भन्दा अझ सुन्दर, तपाईंसँग यसमा धेरै सजावटका पुल र धेरै धेरै तालहरू छन् रोमान्टिक कुनाहरू। यसमा क्याफेटेरिया र टेरेस पनि छ, साथमा टेबुल र बेन्चहरू नि: शुल्क प्रयोगको लागि खानको लागि छ। तपाईं आफ्ना बच्चाहरूलाई पनि लिन सक्नुहुन्छ Baixa de Santo एन्टोनियो पार्क, जहाँ उनीहरूको बच्चाको क्षेत्र र स्केट पार्क पनि छ।
गतिविधिहरू Aveiro मा गर्न
यदि तपाईं पोर्चुगलको Aveiro भ्रमण गर्नुहुन्छ, त्यहाँ केहि चीज छ जुन तपाईंले शहरको आनन्द लिनको लागि कुनै प्रश्न बिना गर्नुपर्दछ। यो पुरानो डु boats्गामा आफ्ना च्यानलहरू जोत्दैछ जुन समुद्री शैवाल र नुन ढुवानीको लागि समर्पित थियो। Aveirenses तिनीहरूलाई कल मोलिसिरोस र तिनीहरू भेनिसका गन्डोलाहरू जस्तै देखिन्छन्, यद्यपि तिनीहरू ठूला छन्।
उनीहरूसँग दुईजना चालक दलका सदस्यहरू छन्, किनकि तिनीहरूले यात्रुहरू पर्याप्त मात्रामा बोक्न सक्दछन, तिनीहरूको आर्थिक मूल्य करिब छ यूरो छ। भ्रमण 45 मिनेट लामो हुन्छ र Aveiro को तीन च्यानल कभर गर्दछ, तपाईंलाई शहरको अर्को परिप्रेक्ष्य प्रदान गर्दै।
अर्कोतर्फ, यदि तपाइँ ग्रीष्ममा Aveiro भ्रमण गर्नुभयो भने, तपाईंलाई यो जान्न चासो छ कि यसमा दुई समुद्र तटहरू छन्। त्यो कोस्टा नोभा यसको अद्वितीय को लागी खडा छ क्यासिनसको रिसकास, नेल धारीदार चित्रित घरहरू, र यसको मोबाइल खानाको स्टालहरूको लागि। लाई रिफर गर्दै बर्रा बीचजहाँ हामीले लाइटहाउसको बारेमा कुरा गरिरहेको थियौं, एउटा बुलेभार्डले घेरेको छ जहाँ तपाईंसँग असंख्य बार र रेष्टुरेन्टहरू छन्।
यी समुद्री तटहरूको पहिलो नजिक छ साओ जैकिन्टो डुनेस प्रकृति आरक्षण। यो प्रकृति को बारे मा नौ सय हेक्टर छ जहाँ तपाईं अद्वितीय समुद्री चराहरू, र टिब्बा आफैलाई देख्न सक्नुहुन्छ, जो दर्शक हो। यो तपाइँको गर्नको लागि उत्तम स्थान हो ट्रेकिंग जब तपाईं ती प्रजातिहरू भेट्टाउनुहुन्छ। यसका मार्गहरू बीच, कल बाहिर देखिन्छ डेस्कोबर्टा दा नेचुरलेजा त्रिल्हो। यद्यपि यस प्राकृतिक रिजर्भको भ्रमण गर्न तपाईंले आगाडि अनुरोध गर्नुपर्नेछ।
अन्तमा, यदि तपाईं Aveiro को साँचो नाडी महसुस गर्न चाहानुहुन्छ, तपाईंले यस मार्फत जानु पर्छ प्लाजा do Peixe। दिन को समयमा, त्यहाँ एक आबादी माछा बजार छ र, रात मा, यो विद्यार्थीहरु को एकाग्रता को विन्दु छ यसको धेरै मा पिउन बार र रेस्टुरेन्ट। र यसले हामीलाई पोर्चुगिज शहरको विशिष्ट खानामा ल्याउँदछ।
पोर्चुगल मा Aveiro को Gastronomy
यद्यपि यस्तो देखिन्छ कि हामी अन्ततः हाम्रो पाक सिफारिश शुरू गर्दछौं, ग्यास्ट्रोनोमीको सन्दर्भमा अभेरोमा सबैभन्दा विशिष्ट चीज मिठाई हो। यो मिठाइको बारेमा हो जुन उनीहरूले बोलाउँदछन् ovo moles, जसको विधि सरल छ: अण्डाको पहेंलो, चिनी र पानी।
माछा को रूपमा, तपाईं को प्रयास गर्नु पर्छ कोड, सबै पोर्तुगलको विशिष्ट, तर त्यो एभेरियोमा हजार तरिकामा तयार पारिएको हो। र पनि pitaú सॉसमा रे, the भुटेको अचारको मोहो, फरक Caldeiradas, the eel स्टू वा ग्रिल समुद्री बास। मासुको सन्दर्भमा, कोमल भेडाभनिन्छ, जो माटोको कन्टेनर भनिन्छ मा तयार छ कालो क्यालोइल्सर खस्ता छाती सुंगुर.
पिउन, तपाईं को प्रसिद्ध वाइन कोशिस गर्नु पर्छ उत्पत्तिको बैररादा पदनाम। र, मिठाईहरूको बीचमा, ओभो मोल्सका अतिरिक्त, तपाईंसँग उत्कृष्ट छ केक र पनि हिम्मत, क्रीपको एक प्रकारको मह, चकलेट वा पनीरले भरिएको।
Aveiro को जलवायु
पोर्तुगाली शहरको हावापानी छ टेम्प्लाडो, लगभग पन्ध्र डिग्रीको औसत वार्षिक तापमानको साथ। शीतकालीन रमाइलो हुन्छ, शून्य भन्दा कम पाँच भन्दा माथि शून्य र औसत लगभग दश। तर यो वर्षा भएको मौसम पनि हो, विशेष गरी जनवरी महिना।
गर्मी तातो छ तर तातो छैन। यी महिनाहरूमा औसत तापमान वरिपरि छन् उन्नाइस डिग्री, न्यूनतम पन्ध्र र अधिकतम तेईस संग। जुलाईमा वर्षाको कम्तिमा पनि मात्रा हुन्छ।
त्यसकारण, तपाईंलाई पोर्तुगालको Aveiro भ्रमण गर्नका लागि उत्तम समयहरू वसन्त र गर्मिहरू हुन्। पतन पनि एक राम्रो समय हो, तर यो अधिक वर्षा हुन्छ। र, यदि तपाइँ पर्यटकहरूको एकाग्रता मनपराउँनुहुन्न भने, उत्तम छ तपाईले रोज्नु भयो वसन्तगर्मीमा देखि, शहर दुबै भित्र र पोर्चुगल बाहिर दुबै धेरै आगन्तुकहरु प्राप्त गर्दछ।
पोर्चुगल मा Aveiro कसरी पुग्ने
पोर्तुगाली शहरको सब भन्दा नजिकको एयरोड्रम त्यो हो पोर्टो। त्यहाँ एक पटक, तपाईं लिन सक्नुहुन्छ मेट्रो, जुन केन्द्रमा पुग्छ लगभग २ minutes मिनेटमा, वा बसमा, यद्यपि पछिल्लो समय लिन्छ। पछि, पोर्टोको कम्पनहा स्टेशनबाट तिनीहरू प्रस्थान गर्छन् Aveiro को लागि सीधा ट्रेनहरु, जसको यात्रामा एक घण्टा र एक चौथाई लाग्छ। यसको अंशको लागि, पछिल्लो शहरको स्टेशन केन्द्रबाट १ fifteen मिनेट जति छ।
तपाईमले देख्न सक्नुहुने रूपमा, यो एक मार्ग हो जहाँ तपाईंले धेरै स्थानान्तरणहरू गर्नुपर्दछ। यस कारणका लागि तपाईका निजी कारमा वा भाडामा लिनु पर्ने कारमा तपाईको लागि उत्तम हुन सक्छ। थप रूपमा, यस तरिकाले तपाईं वरपरका ठाउँहरूमा स्वतन्त्र रूपमा जान सक्नुहुन्छ।
यदि तपाईं पूर्व वा उत्तरबाट आइपुग्नुभयो भने, तपाईंलाई शहरमा लैजाने राजमार्ग यही हो A25, जब तपाईं दक्षिणबाट यात्रा गर्नुहुन्छ तपाईं यस मार्फत जानुहुनेछ A17। जहाँसम्म, यदि हामी सडक यातायातको बारेमा कुरा गर्छौं भने, तपाईं त्यहाँ छन् भनेर जान्न पनि इच्छुक हुनुहुन्छ बस लाइनहरु त्यो स्पेनका विभिन्न शहरहरूबाट सिधै Aveiro पुग्छ। यो La Coruña, Valladolid वा Bilbao को मामला हो।
Aveiro रेलवे स्टेशन
अर्कोतर्फ, पोर्तुगाली शहर सानो छ। फलस्वरूप, तपाईं यसलाई पैदल अन्वेषण गर्न सक्नुहुन्छ। यद्यपि तपाईसँग नि: शुल्क नगरपालिका सेवा पनि छ बाइक loanण, लोकप्रिय रूपमा परिचित बगस। Aveiro समतल छ त्यसैले तपाईं प्याडल गर्न को लागी धेरै मेहनत लिने छैन।
पोर्चुगलमा Aveiro को बारे मा चासो को अन्य जानकारी
पोर्तुगाली शहरले वर्षभरि दुई उत्सव मनाउँछ। जनवरीमा सान गोन्जालिटोको भोज, जसले नाविकहरूलाई श्रद्धांजलि दिन्छ। र जुलाईमा, ईस्टुरी फेस्टिवल, असंख्य गतिविधिहरू जस्तै मोलिसिरोस दौडहरू र क्षेत्रीय नृत्यहरूको साथ।
अर्कोतर्फ, यदि तपाईं आफ्नो गाडीमा अभेरियो यात्रा गर्नुहुन्छ भने, तपाईंलाई यो जान्न चासो छ कि A25 मोटरवे, जुन तपाईंलाई शहरमा पु takes्याउँछ, हो टोल। पोर्तुगलमा, यी केवल क्रेडिट कार्ड द्वारा भुक्तान गर्न सकिन्छ। तर तपाईं एक किन्न सक्नुहुन्छ प्रीपेड कार्ड कि तिनीहरू धेरै ग्यास स्टेशनहरूमा बेच्छन्। जब यो पोर्तुगाली शहरमा पार्कि to गर्न आउँदछ, तपाईं केन्द्र बाहिर बाहिर कुनै समस्या हुनेछ, यो विनियमित छ जहाँ। एस्टिनरीको अर्को पट्टिमा तर ऐतिहासिक केन्द्रको नजिक तपाईंसँग धेरै छ नि: शुल्क पार्कि.
पुनर्स्थापनाको लागि, तपाइँ खाना खानु भन्दा पहिले राख्नु भएको एपेटाइजरसँग सावधान हुनुपर्दछ। यदि तपाईंले तिनीहरूलाई प्रयास गर्नुभएन भने, केही पनि हुँदैन। तर यदि तपाइँ गर्नुहुन्छ भने, तपाइँ तिनीहरूले अलग चार्ज हुनेछ खाना को मूल्य को। यदि, सामान्य रूपमा, यो माखन वा जैतून हो, यो सस्तो हुन्छ। तर, यसको सट्टामा यो हेम छ, यो पहिले नै धेरै महँगो हुनेछ।
अन्तमा, पोर्तुगालीहरू पूर्ण रूपमा बुझ्छन् क्यास्टिलियन त्यसोभए आफूलाई बुझ्ने समस्या भएन। यद्यपि, हामी केहि शब्दहरू उल्लेख गर्दछौं जुन तपाईं जान्न रुचि राख्नुहुन्छ, खास गरी जब बारमा अर्डर गर्दा। तिनीहरू सामान्यमा कफी भन्छन् bica, तर यदि यो काटिएको छ भने तपाईंलाई एक सोध्नु पर्छ पिंगाडो। यसको अंशको लागि, दूधको साथ कफि हो मेला डे लेइट। र, यदि तपाईं कफीको थोपाको साथ सहि गिलास दूध चाहानुहुन्छ भने, गलाओ.
अन्तमा, पोर्चुगल मा Aveiro यो एक सुन्दर शहर हो जुन भेट्न लायकको छ। यसले तपाईंलाई सुन्दर स्मारकहरू, भव्य समुद्र तटहरू, रमाइलो मौसम र स्वादिष्ट भोजन प्रदान गर्दछ। तर सबै भन्दा माथि, यसले तपाईंलाई सानो भेनिसमा भएको महसुस गर्दछ।
लेखको पूर्ण मार्ग: Absolut यात्रा » पोर्चुगल मा Aveiro
अमाल्फी तटमा के हेर्ने